Last updated on March 8th, 2020 at 02:51 pm
एजेन्सी । हरेक व्यक्तिमा छुट्टा छुट्टै गुण र स्वभावहरु हुन्छन् । जसका कारण हरेक मान्छेको भाग्य पनि फरक फरक हुने गर्दछ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । यहाँ हामीले युवतीहरु भाग्यमानी हुने बिषयमा चर्चा गरेका छौं । यी ६ वटा गुण भएका युवातीहरु साह्रै भाग्यमानी हुने गर्दछन् ।
१. समुन्द्रशास्त्रका अनुसार जुन युवतीको अनुहार पितासँग मिल्छ त्यस्ता युवती भाग्यमानी हुन्छन् । त्यस्तै आमासँग अनुहार मिल्ने युवक पनि भाग्यमानी मानिन्छन् ।
२. कालो कपाल भएका र आगाडितिर झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख छ । चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका युवतीलाई उत्तम मानिएको छ ।
यो पनी पढ्नुहोसः राती सुत्ने समयमा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस
काठमाडौँ । आनन्दको निद्राको चाहना कसलाई हुँदैन र । प्राय: हामीले मिठो निद्राका लागि सामान्य उपाय अपनाउने गर्दछौँ। सफा ओछ्यान, शान्त वातावरण तथा राम्रो कुरा सुनेर ओछ्यानमा जानु। तर केही यस्ता कुरा छन् जो जसले तपाईँको मिठो निद्रा बाहेक अन्य विपरीत असर पार्ने गर्दछ। वास्तु विशेषज्ञ मुकुल र स्तोगीका अनुसार पुराण र धर्मशास्त्रका केही यस्ता टिप्स उल्लेख गरिएका छन् त्यी नियमको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र त्यसले न कारात्मक अ सर पार्ने गर्दछ।सुत्ने समय ध्यान दिनुहोस् यी कुरा :
१)सुनसान घरमा एक्लै नसुत्नुहोस्। त्यस्तै देवमन्दिर तथा श्मशानमा पनि सुत्नु अशुभ मानिने गरिन्छ।
२) कुनै सुतिरहेको मानिसलाई अचानक निद्रा नबिगारिदिनुहोस्।
३) विद्यार्थी, नोकर र वडीगार्ड धेरै सुतेको छ भने उनीहरुलाई उठाउनु पर्दछ।
४) स्वस्थ मानिसको आयुरक्षा हेतु ब्रह्मामुर्हुतमा उठ्नु शुभ मानिन्छ।
५) अध्यारो कोठामा नसुत्नुहोस्।
६) चिसो खुट्टा लिएर नसुत्नुहोस्, खुट्टालाई सुख्खा बनाएर मात्र सुत्दा लक्ष्मीको वास हुने गर्दछ।
७) विहान सूर्योदय र वेलुकी सूर्यास्तका समय नसुत्नुहोस्। यसले मानिसलाई रोगी र दरिद्र बनाउने गर्दछ।
८) ओछ्यानमा बसेर खाना नखानुहोस्।
९) सुत्ने समयमा टिका लगाएको छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस्।
१०) दक्षिण दिशामा खुट्टा राखेर कहिलै नसुत्नुहोस्।
यो पनीः तपाई कसैको प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी गल्ती गर्दै नगनुहोस्
दिनानुदिन मानिसहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको क्रेज यस्तो छ कि मानिसहरु आफ्नो धेरैजस्तो समय विभिन्न किसिमका पोस्ट शेयर गर्नमा नै व्यस्त रहन्छन् । मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनको लागि मात्र होइन आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धीत र सम्बन्धसँग जोडिएका विविध कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ त ?
व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धीत कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा शेयर गर्दा यसले मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभाव निकै नराम्रो हुन सक्छ । के सही वा के गलत हो त्यसलाई पहिचान गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न आवश्यक छ । सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनसँग मेल खाने के–के कुरा सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहुँदैन ?
झै–झगडाः सामान्य वादविवाद वा झगडा हरेक सम्बन्धमा हुन्छ र यसलाई सामान्य नै मानिन्छ । तर त्यही झगडाको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु वा देखाउनु एकदमै गलत कुरा हो । यसले आपसी झगडा झन् बढाउँछ । यसका साथै त्यसले तपाईंको पार्टनरको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न सक्छ । भने, अन्य मानिसको अगाडि उसको छवि नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभन्दा कुनै मिल्ने मान्छेसँग मनको कुरा शेयर गर्नुपर्छ ।
घुम्न जाने ठाउँको जानकारीःयदि तपाईं छुट्टिमा कतै घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा नदेखाउनुहोस् ।
कसरी बनिन् १ वर्षमा २० सन्तानकी आमा? थाहापाउँदा भइन्छ हैरान !
आगामी साउन १ गतेदेखि यि मोबाइलहरु नचल्ने – थाहापाइराखौं !